Race 3 Update: Ganacsigiisa halka uu ku istaagayo, saamiga laga helay iyo natiijadiisa rasmiga ah – Filimside.net
Race 3 Update: Ganacsigiisa halka uu ku istaagayo, saamiga laga helay iyo natiijadiisa rasmiga ah
Mega Star Salman Khan filimkiisa Race 3 ee Ciidul Fitrigii tiyaatarada la saaray (15 June 2018) ayaa hoos u dhac xad dhaaf ah sameeyay todobaadkiisa sedexaad wuxuuna keenayaa 1 Crore oo kaliya sida shabakada Boxoffice India soo daabacday.
Race 3 sheeko ahaan dadka wey iska diideen waxaana tiyaatarada oo dhan kala wareegay filimka Sanju oo ganacsi waali ah sameenayo taasina waxay soo dadajiay in Race 3 gabi ahaanba todobaadkiisa afaraad masraxa isaga dagi doono.
Race 3 labadiisa todobaad ee hore ayuu ganacsi wacan sameeyay kana caawisay inuu noqdo filim bad baaday haddii xili aan fasax jirin la daawan laheyn Salman Khan guuldaro weyn ayuu qaadan lahaa.
Fadlan hoos kaga bogo ganacsiga Race 3 sameeyay mudo sedex todobaad ah sida shabakada BOI soo daabacday:
Todobaadka labaad – 24.64 Crore
Todobaadka sedexaad – 90 Lakh (Mudo 5-maalmood ah)
Wadarta Guud – 165.62 Crore (Trade Figure)
Race 3 cimri ahaantiisa wuxuu ku istaagi doonaa 166 Crore(Trade Figure) waana ganacsiga uu filimka Sanju mudo 5-maalmood ah ku sameeyay!!
Kooxda cajaladaha qeybiyaan Race 3 waxay ka heleen 84 Crore waana filim AVERAGE ah sida shabakada BOI cadeesay Race 3 wuxuu noqon lahaa HIT dhameestiran haddii saamiga kooxda cajaladaha qeybiyaan ka heli lahaayeen 95 Crore balse ganacsigiisa ayaaba sii socon waayay madaama sheekadiisa diidmo waali ah la kulantay.
Waxaa Aqrisay 1,211